एजेन्सी बैशाख १८ – डाइटिङ गर्न सजिलो छैन । तौल घटनाउन स्वस्थ खानेकुरा खाए पुग्छ भन्ने सोच्नुभएको होला तर यसका लागि खाना खाने नयाँ तरिका अपनाउनुपर्छ । आफ्नो शरिरको अतिरिक्त तौललाई नियन्त्रणमा राख्न ब्राइट साइडले केही ट्रिकबारे जानकारी दिएको छ । यी ट्रिकबारे तपाईंलाई पहिला कसैले पनि जानकारी दिएनन् । १. जब बाहिर खानुहुन्छ, सकेसम्म ..
काठमाडौँ, वैशाख १७ – स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालको दर..
क्यान्सर उपचारका लागि कार्यविधि बनाउँदै सरकार
काठमाडौँ, वैशाख १७ – सरकारले सबै अस्पतालमा क्यान्सरको उपचारमा एकरुपता ल्याउन क्य..
एजेन्सी बैशाख १७ – सुन मानिसहरुको सबैभन्दा प्रिय धातु हो । इतिहासमा यसका लागि कय..
एजेन्सी नामः नाम त सबैको विशेष हुन्छ । सेक्सपियरले ‘नाममा के राखिएको छ र ? ’ भने..
एजेन्सी बैशाख १७ – यदि तपाईंलाई पोर्न हेर्न निकै मनलाग्छ र यसका लागि आफ्ना महत्वपूर्ण काम पनि छोड्नुहुन्छ भने तपाईंको लागि नराम्रो खबर छ । सोधका अनुसार जसलाई पोर्न हेर्न मनपर्छ उनीहरुको जीवनबाट बिस्तारै रोमान्स कम हुने गर्दछ । उनीहरुलाई डेटमा जान मनपर्दैन किनभने उनीहरुलाई यसको आवश्यकता नै छैन जस्तो लाग्न थाल्छ । अनुसन्धानका अनुस..
अब स्मार्टफोनले हुनेछ मधुमेहको उपचार !
बीबीसी बैशाख १७ – वैज्ञानिकले मुसामा जीवित कोशिकाको गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्मार्टफोनको प्रयोग गरेको छ । जीव विज्ञान र प्रविधीको प्रयोग ती मुसाको ब्लड सुगरको स्तरलाई नियन्त्रित गर्नका लागि गरियो जो मधुमेहबाट पीडित थिए । साइन्स ट्रान्सलेशन मेडिसिनमा प्रकाशित यो शोध अनुसार यसले मधुमेहको उपचारमा मद्दत पाउन सकिन्छ । वैज्ञा..
यस्तो हुनेछ, यो साता तपाईंको राशिफल
जथाभावी आयुर्वेदिक औषधि खादा के हुन्छ ?
डा. राजेन्द्रकुमार गिरी प्रबन्ध निर्देशक, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति आयुर्वेदिक औषधि भन्दैमा जथाभावी प्रयोग गर्न हुँदैन । उत्पादन मिति नभएका तथा औषधि कम्बिनेसन नखुलाइएका आयुर्वेदिक औषधि खानु हुँदैन । कतिपय आयुर्वेदिक औषधि विषाक्त जडीबुटीबाट बनाइएका हुन्छन् । त्यसकारण चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र त्यस्ता औषधि सेवन गर्नुपर्छ । स..
डा. दिनेशप्रसाद बराल सोहम योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, लोकन्थली प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिअनुसार अपनाइने पाँच विधि जल चिकित्सा, माटो चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य–किरण चिकित्सा र आकाश चिकित्सा हो । तीमध्ये एक महत्वपूर्ण चिकित्सा आकाश भन्नाले खालीपन तथा शून्यतालाई जनाउँछ । यसको प्रयोग उपवासका माध्यमबाट गरिन्छ । स्वस्थ रहन ..
दीपक नेपाल योग प्रशिक्षक धेरै मानिसमा सम्झन नसक्ने तथा दिमागमा पनि धेरै कुरा खेल्ने समस्या हुन्छ । मस्तिष्कलाई एकाग्र बनाउन सकिएन भने यस्तो समस्या देखिन सक्छ । हामीले दैनिक आफ्नो लागि केही समय छुट्याएर योग तथा प्राणायाम गर्न सक्यौँ भने दिमाग र मनलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छौँ । आफ्नो स्नायु प्राणालीलाई बलियो र शरीरलाई पनि सन्तुलनमा ..
निक काम सकेर फुर्सदमा टेलिभिजन हेर्नु राम्रै हो । आवश्यकताअनुसार आफूलाई मन पर्ने कार्यक्रम हेर्दा ‘मुड फ्रेस’ पनि हुनुका साथै विभिन्न जानकारी पनि प्राप्त हुन्छ । तर, कतिपय व्यक्ति भने टेलिभिजनको ‘एडिक्टेड’ नै हुन्छन्, हरबखत हेर्नैपर्ने । मुख्य काम नै छोडेर टेलिभिजनमा समय बिताउनु गलत आदत हो । खासगरी, बच्चाहरूलाई यो लत लागेको हुन्..
डा. राजेन्द्र बराल क्यान्सररोग विशेषज्ञ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल अव्यवस्थित जीवनशैली र खानपानमा ध्यान नदिँदा क्यान्सररोगका बिरामी अहिले बढेका छन् । क्यान्सर एउटा रोग मात्र नभई रोगहरूको समूह नै हो । क्यान्सर सरुवा रोग नभए पनि विश्वका धेरैजसो मानिस यो समस्याबाट ग्रसित छन् । मानिसको शरीरमा देखिने क्यान्सर पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् ..